Umaki: chris baggott | Martech Zone
Umaki: chris baggott
Ungizwe kahle… lonke ibhizinisi elasekhaya. Angiphikisani nokuthi ibhizinisi lakho lingaheha ibhizinisi likazwelonke nelamazwe omhlaba. Ngimane ngiphikisana neqiniso lokuthi amabhizinisi amaningi azama ukugwema ukubizwa ngegama lendawo - noma ngabe kungabasiza empeleni. Sikhuthaza wonke amaklayenti ethu ukuthi akhuthaze indawo yawo noma izindawo zawo. Noma ngabe kungenxa yezicelo eziqinile zamamephu njengoba sakha i-Wild Birds Unlimited, noma simane sikhuthaza amaklayenti ukuthi
NgoMgqibelo, Ephreli 16, 2011 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
NgoLwesihlanu, nginikezwe ithuba elimangalisayo lokuthi ngibambe iqhaza Engqungqutheleni Yezokuqamba Okusha yeCompendium. Ngaphansi kobuholi bukaMongameli uFrank Dale, ngombono ovela kuBlake Matheny, nangokwesekwa ngumsunguli uChris Baggott noSales VP Scott Blezcinski, inkampani yathatha “isikhathi sokuphuma” ekusebenzeni futhi, esikhundleni salokho yanikela ngosuku emisha. UChris waqala lo msebenzi ngendaba emangalisayo yokuthi wehluleka kanjani ebhizinisini elilodwa, kepha ngemuva kokukhomba i-
Amafomula Wokumaketha Nge-imeyili kanye Nezinkomba Eziyinhloko
NgoMgqibelo, Juni 23, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Abathengisi be-imeyili abasha nabanolwazi kufanele baqonde amamethrikhi abalulekile wokuhlaziya ababhalisile babo nemikhankaso. Nakhu ukuwohloka kwamamethrikhi wokukhangisa we-imeyili nokuthi uwabala kanjani.
Umngani wami omuhle, uChris Baggott, usezokhipha incwadi yakhe yokuqala, i-Email Marketing By the Numbers. UChris ubhale incwadi no-Ali Sales, omunye umngani wami. UChris uzakwethu osungula i-ExactTarget, inkampani engisebenza kuyo njengeMenenja yoMkhiqizo. Ibhulogi kaChris (kanye nabanye abaholi nabasebenzi abahle kakhulu) bacindezele i-ExactTarget ku-stratosphere - eqanjwe njengenye yezinkampani ze-Inc ezikhula ngesivinini esikhulu ezweni. Hhayi kuphela enginakho